အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ AIPMC မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မိုက်ဂရန့်ဒေသ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများတွေ့ဆုံ	Posted on March 8, 2010	by bmta05 မတ် ၈၊ ၂၀၁၀။
မစ္စတာနိုင်ကရိုင်ဆတ် ချွန်ဟာဗန်နှင့် အဖွဲ့သည် CDC ကျောင်းမှ ပြန်လည် မထွက် ခွာမှီ ကျောင်းစာသင်ခန်းများကို CDC ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် အတူ လှည့်လည် ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ရင်းရင်း နှီးနှီး နုတ်ဆက် စကား ပြောခဲ့ကြပြီး နေ့လည် ၁၂နာရီ ၃၀ခန့်တွင် CDC ကျောင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါသည်။ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန (BMTA)
This entry was posted in သတင်း, Burmese pages only. Bookmark the permalink.	← သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ထီမ်းညှိရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်